कतार गएका युवा उपचार नपाएर विचल्लीमा (पीडितको फोटो फिचर र भिडियोसमेत) – Everest Dainik – News from Nepal
कतार गएका युवा उपचार नपाएर विचल्लीमा (पीडितको फोटो फिचर र भिडियोसमेत)
काठमाडौं, साउन ७ । राम्रो तलव पाउने आश्वासनमा कतार पुगेका दुई युवा भने अनुसारको तलव, सुविधा र उपचार नपाएपछि विचल्लिमा परेका छन् । काठमाडौंको सामाखुशीस्थित प्यासिफिक ओभरसिलले पठाएका नुवाँकोटका सोहन पाण्डे र दिलिप कार्की विचल्लिमा परेका हुन् ।
ओभरसिसका संचालक जगत गुरुङले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भन्ने बिज्ञापन गरेर ती दुवैलाई १ लाख २० हजार रुपैयाँ असुली कतार पाठाएका थिए । ओभरसीजका मालिक गुरुङले श्रमको झुटो कागजपत्र बनाएर कतारको एके सेक्युरिटी आपुर्ती गर्ने कम्पनीलाई पठाएको थियो ।
उनीहरुलाई बस्ने सेल्टर पनि आउनजान तीन घण्टा लाग्ने दुरीमा ब्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ चर्को गर्मीले हातखुट्टामा घाउ आएर थला परेका पाण्डेले प्यासिफिक ओभरसिजले श्रमको झुटो कागज बनाएर आफुलाई फसाएको दाबी गरे । बैदेशिक रोजगार विभागले पनि झुटो श्रम सम्झौताको कागजपत्रमा छाप लगाईदिएको उनको गुनासो छ ।
‘खुट्टामा आएको घाउले जुत्ता लगाउन हुँदैन, उनले भने, ‘उपचार गर्न भन्दा कम्पनीले सुनुवाइ गर्दैन ।
‘चर्को घाममा १२ घण्टा खटेर महिनाको १ हजार २ सय रियल कमाई हुन्छ । के खाने ? के बचाएर घरमा बालबच्चालाई पठाईदिने ?’ पाण्डेले भने, ‘नेपालमा चर्को ब्याजमा साहुसँग ऋण लिएको हुँ । ऋण तिर्न निकै धौधौ भैरहेको छ ।’
कार्यरत कम्पनीको कार्य क्षेत्रमा प्यास लागेको समयमा पानी पिउनसमेत नपाइने उनले बताए । बस्ने ठाउँ समेत छैन, सौचालय छैन, बेलुकी बस्ने ठाउँमा बत्तीसमेत छैन,’ उनले भने, ‘हामीले नर्कको जिन्दगी गुजारेका छौं । कतारको उक्त कम्पनीमा १ हजार २ सय नेपाली कामदारहरुले दुःखका साथ काम गरिरहेको उनले बताए ।
उनीहरुले आफूहरुले सम्झौता अनुसार तलव नपाएको, उपचार नपाएको, अन्य आधारभूत सुविधा समेत नपाएको गुनासो गरेपछि त्यहाँ कार्यरत कम्पनीका मालिकले धम्क्याएको पाण्डेले बताए । ‘तँलाई मारेर केही फरक पर्दैन भनेर धम्क्याए,’ पीडित पाण्डेले भने, हामी गुनासो गर्न कहाँ जाने ?
पीडित युवाहरु सहयोगको याचना गर्दै त्यहाँस्थिति नेपाली दूतावाससमेत पुगेका थिए । समयको अभाब भन्दै दूतावासका कर्मचारीले फोटोसहित इमेलमा गुनासोसहित निवेदन गर्न आग्रह गरेको उनीहरुले बताए । राजदुतावासबाट आवश्यक सहयोग नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
हेर्नुहोस पीडित युवाको गुनासो र यहाँ पीडित युवाका आको बिलौना भिडियोमा-